Naanị Anyị Ji Ngwa Bara Uru nke Anyị Pụrụ Use Jiri | Martech Zone
Izu a abụwo izu siri ike… ọtụtụ nrụgide, ọtụtụ mgbanwe, na ọtụtụ ọganihu. Na 42 afọ, M mara mma ka m ụzọ ma m nwere ihe omume a izu na n'ezie kụrụ ike.
Anọ m na-ekwu ruo oge ụfọdụ na mgbasa ozi ọha na eze bụ ihe nkwalite dị egwu - mana na ụlọ ọrụ ndị na-emebu mmekọrịta ọha na eze bụ ezigbo ndị na-enweta ma nweta site na mgbasa ozi. Ieslọ ọrụ ndị na-abụghị mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ma ọ bụ na-emegide mmekọrịta mmadụ na ibe ya, anaghị amata na itinye aka na mgbasa ozi mmekọrịta. Gịnị kpatara ha? Ha enwetabeghị ahịa ma ọ bụ nduzi site na mmekọrịta mmadụ na ibe ya. N'ihi ya - dị ka a ụlọ ọrụ mgbasa ozi ọhụrụ, Anyị inupụ ụfọdụ ụlọ ọrụ n'ime mmadụ mgbasa ozi… ma ndị ọzọ anyị na-asọ n'ime ndị ọzọ nkwado azum. Mgbasa mgbasa ozi bụ ọ bụghị maka onye obula (ndo gurus!).
Otu ihe ahụ na-aga ndị mmadụ. N'ime afọ iri gara aga, ekwenyere m na m mepụtara netwọkụ ọnụahịa, ndị mmadụ, na akụrụngwa na-enweghị atụ. Aga m akpọ ya akụ. M rụsiri ọrụ ike na-ewu m akụ. Azụghị m ya. Emeela ọtụtụ afọ na afọ nke nrụgide mgbe niile. Mgbe m laghachiri, e liri ya. Mgbe m rụsiri ọrụ ike na ya, eweghachiri m akụ m otu inch n'otu oge. Site na oge na mgbalị m tinyeworo iji wulite akụ m, enwere m mmasị na ya. Ọ dị oke ọnụ ahịa. A mụrụ m ụlọ ọrụ n'ihi akụ m.
Agbanyeghị, anaghị m edebe akụ m. You'll ga ahụ nke a na blọọgụ, ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ, ngwa ọrụ, akwụkwọ, ihe omume, ngwa, ihe ngosi redio… ha niile ghe oghe nye onye ọ bụla chọrọ iji ya. Ọ bụ ezie na m na-echekwa akụ m, mana agaghị m ezo zoo ya. Gịnị kpatara m Achọrọ m ka ndị ọzọ rite uru na akụ m.
Ma ụfọdụ agaghị eme otú ahụ. Ihe m matara bụ na m na-eji akụ m egwu egwu, m na-etinyekwa ya otú ahụ n’ihi na amaara m otú e si eji ya eme ihe were ya. Ahụrụ m na ọ nwere ikike ma mara etu o si gbanwee ndụ m. Amaara m na ọ ga-enye m na onye ọ bụla nwere ike leverage it n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Ọ bụrụ na mmadụ egosi m ebe ha na-adọba ụgbọala ya na ngwa ọrụ ruru ọtụtụ iri puku, enwere m ike ịfụ isi ma gawa ije. Y'oburu na ha buru igwe, ha ghotara na igbe oru a nwere ike inye ha oru na ndu ha. Enweghị m ike iji ya, ya mere anaghị m eji ya akpọrọ ihe.
Mgbe mmadu matara uru akụ m bara, o di egwu. Achọpụtara m n'izu a na ụfọdụ enweghị ike, ọ bụ ezie! Buru nke ahụ n'uche ka ị na-agwa ụlọ ọrụ okwu banyere mgbasa ozi mmekọrịta na ịntanetị. Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ na-eto eto ma na-enwe ọganihu na-enweghị ha, ha ike ghọta uru ha nwere ike iweta. Ikwesiri igosi ha ya. Ma ị gaghị enwe ike.
Burukwa ya n’uche n’ebe ndị mmadụ nọ… ụfọdụ ndị ga-eche na netwọkụ gị yana mmekọrịta mmekọrịta gị abụghị akụnụba, ha ga-eche na ị na-egbusi oge gị. Ọ nwere ike ịdị ka ihe doro anya, mana we naanị jiri ngwaọrụ ndị ahụ kpọrọ ihe we mara we nwere ike iji.
Tags: ngwa ahiaahia ikpo okwungwa ahiasoftwarengwaọrụuru
Disemba 26, 2010 na 6:45 mgbede
Kedu ọkwa mara mma! Daalụ.
Disemba 28, 2010 na 9:55 mgbede
Ezigbo mma post, Doug. Ihe ọma ị ga-eche maka…